अगस्ट 12, 2019 – 2माछा
घर / अगस्ट 12, 2019
व्यवस्था 10: 12- 22
10:12 र अब, हे इस्राएलका, के प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं को आवश्यकता गर्दैन? तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको डर मात्र, र उहाँको मार्गमा हिंड्न, र उहाँलाई प्रेम, र आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राण संग प्रभु तपाईंको परमेश्वरको सेवा,
10:13 र तपाईं प्रभुको आज्ञा पालन, र आफ्नो समारोह, जो म यो दिन तपाईं निर्देश छु, यो राम्रो तरिकाले तपाईं संग हुन सक्छ भनेर.
10:14 यसलाई, स्वर्गमा प्रभु आफ्नो परमेश्वरको पर्छ, र स्वर्गको स्वर्ग, र पृथ्वी, र सबै कुरा यी भित्र छन्.
10:15 अब प्रभु राम्ररी आफ्नो बाबु गर्न सामेल थियो, र उहाँले तिनीहरूलाई प्रेम, र उहाँले तिनीहरूलाई पछि आफ्नो सन्तान छनौट, छ, तिमीहरू, सबै जातिका बाहिर, बस आज सिद्ध भइरहेको छ रूपमा.
10:16 त्यसैले, आफ्नो हृदयको foreskin लिङगगको छाला काट्नु, र अब आफ्नो घाँटी stiffen.
10:17 प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वर आफैले देवताहरूको परमेश्वरको छ, र प्रभुहरूका प्रभु, परमेश्वरको ठूलो र शक्तिशाली र डरलाग्दो, जो कुनै व्यक्तिले एहसान र कुनै घूस स्वीकार.
10:18 उहाँले अनाथ र विधवालाई लागि न्याय पूरा. उहाँले sojourner प्रेम, र उहाँले तिनलाई खाना वस्त्र रूपमा साथै दिन्छ.
10:19 त्यसैले, तपाईं पनि sojourners प्रेम गर्नुपर्छ, तपाईं को लागि पनि मिश्र देशमा नयाँ आगमन थिए.
10:20 तपाईं प्रभु आफ्नो परमेश्वरको डर पर्छ, र उसलाई एक्लै तपाईं सेवा गर्नेछौं. तपाईं उसलाई अपनाउँछन् पर्छ, र तपाईं आफ्नो नाम कसम पर्छ.
10:21 उहाँले आफ्नो प्रशंसा र आफ्नो परमेश्वरको छ. उहाँले तपाईं यी महान र भयानक कुराहरू लागि गरेको छ, जो आफ्नो आँखा देखेको छु.
10:22 सत्तरी प्राण रूपमा, आफ्नो बाबु मिश्र मा descended. र अब, हेर, प्रभु आफ्नो परमेश्वरको तपाईं स्वर्गमा को तारा जस्तै हुन गुणन छ। "
मत्ती 17: 21- 26
17:21 And when they were conversing together in Galilee, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “The Son of man shall be delivered into the hands of men.
17:22 र तिनीहरूले उहाँलाई मार्नेछ, तर तेस्रो दिनमा फेरि उठ्नेछ। "अनि तिनीहरूले अति saddened थिए.
17:23 र तिनीहरूले कफर्नहुम आइपुगेको थियो जब, आधा शेकेल संकलित गर्नेहरूलाई पत्रुस नजिक, र तिनीहरूले उहाँलाई भने, "आफ्नो शिक्षक आधा शेकेल तिर्नुपर्छ छैन?"
17:24 उसले भन्यो, "हो।" अनि घर मा प्रवेश गरेका थिए गर्दा, येशूले तिनलाई अघि गए, यसो: "यो कसरी तपाईं देखिएन, सिमोन? पृथ्वीको राजा, जसलाई देखि तिनीहरूले आदर वा जनगणना कर प्राप्त गर्छौं: आफ्नै छोरा बाट वा विदेशीहरू देखि?"
17:25 अनि उहाँले भन्नुभयो, "विदेशीहरू बाट।" येशूले तिनलाई भन्नुभयो: "त्यसपछि छोराहरू मुक्त छन्.
17:26 तर हामी तिनीहरूलाई एउटा अवरोध बन्न सक्छ भनेर छैन: समुद्र जाने, र एक हुक डाली, र हुर्केका छ कि पहिलो माछा लिन, र यसको मुख खुलेको गर्दा, तपाईं एक शेकेल पाउनुहुनेछ. यसलाई लिन र तिनीहरूलाई यो दिन, मेरो लागि र तपाईंलाई। "